काठमाडौंमा कति छन् भ्यागुता ? यसरी हुँदैछ खोजी | suryakhabar.com
Home पत्रपत्रिका काठमाडौंमा कति छन् भ्यागुता ? यसरी हुँदैछ खोजी
काठमाडौंमा कति छन् भ्यागुता ? यसरी हुँदैछ खोजी
on: २ भाद्र २०७६, सोमबार १३:४८ In: पत्रपत्रिकाTags: No Comments
काठमाडौँ । भ्यागुता प्रजातिको पहिचान, अध्ययन र संरक्षणका लागि ‘नागरिक वैज्ञानिक’ अभियान सुरु गरिएको छ । भ्यागुताको अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन र जनचेतना फैलाउन वातावरण संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र (इन्प्रोक्स), उभयचर तथा सरीसृपका साथीहरू (क्यारोन), वन्यजन्तु संरक्षण संघ (डब्लूसीएन) नेपाल, गोल्डेन गेट कलेजलगायत संस्थाले ‘क्रोकिङ मनसुन २०१९ः भ्यागुता तथा पोखरी खोजका लागि नागरिक अभियान’ सुरु गरेका हुन् ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानमा योगदान गर्ने सर्वसाधारणलाई नागरिक वैज्ञानिक भनिन्छ । अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा सर्वसाधारणबाट उपत्यकामा पाइने भ्यागुताको प्रजातिबारे जानकारी र बासस्थानको तथ्यांक लिइने इन्प्रोक्सका सचिव एवं वैज्ञानिक चन्द्रमणि अर्यालले जानकारी दिए ।
दोस्रो चरणमा ताल तथा पोखरीमा रहेका भ्यागुता पहिचान गरी तस्बिर लिइनेछ । सम्बन्धित विज्ञहरूले तस्बिरका आधारमा भ्यागुताका प्रजाति पहिचान गर्नेछन् । ‘यस वर्ष भ्यागुतासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, अनुसन्धान गर्ने, प्रजाति पहिचान गर्नेजस्ता कार्य गर्छौं,’ अर्यालले भने ।
बढदो सहरीकरण, प्रदूषण र पानीका स्र्रोत सुक्न थालेपछि काठमाडौंमा पाइने भ्यागुता समस्यामा परेको हुन सक्ने भएकाले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको डब्लूसीएनकी निर्देशक एवं वातावरणविद् सञ्जीवनी योञ्जनले बताइन् । अभियान मनसुनभर चल्नेछ । भ्यागुता तथा काठमाडौंका पोखरीसम्बन्धी रुचि राख्ने सबैले अभियानमा भाग लिन सक्नेछन् ।
भ्यागुताजस्ता उभयचर जीवको संख्या घट्दा मानिसको दैनिक जीवनमा असर पर्नुका साथै लामखुट्टेलगायत कीरा बढ्न सक्ने भएकाले पनि भ्यागुताको अनुसन्धान तथा संरक्षण आवश्यक रहेको जैविक विविधता विज्ञ एवं साउथ चाइना एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीका विद्यावारिधि शोधार्थी दीपक खड्काले बताए । उनका अनुसार भ्यागुताले लामखुट्टेलगायत कीरा खाइदिएर मानव तथा बालीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन् ।
काठमाडौंमा कति छन् भ्यागुता ?
नेपालमा ५६ प्रजातिका उभयचर (जमिन र पानी दुवैमा बस्ने जीव) पाइएका छन् । एम्फिबिया वेभका अनुसार नेपालमा ५३ प्रजातिका भ्यागुता छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सन् २०१३ मा गरिएको अनुसन्धानमा ८ र सन् २०१८ मा १० प्रजातिका भ्यागुता भेटिएका थिए ।
अभियानबाट फरक विवरण आउने अपेक्षा लिइएको अभियानका संयोजक एवं क्यारोनका उभयचर तथा सरीसृप अध्येता प्रकाशचन्द्र अर्यालले बताए । ‘प्रदूषित सहर काठमाडौंमा मात्रै १० प्रजातिका भ्यागुता रहेको अभिलेख हुनाले नेपालमा भ्यागुताको प्रजाति ५३ भन्दा बढी हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सन् २००४ यता विश्वमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सयवटा नयाँ प्रजाति पत्ता लाग्ने गरेको छ । पृथ्वीमा ८ हजार ७२ प्रजातिका उभयचर पाइएका छन्, जसमध्ये ७ हजार १ सय २२ प्रजातिका भ्यागुता छन् । खानाका लागि पाहा प्रजातिको भ्यागुताको सिकार, कक्षा ११ मा प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रयोग, भूउपयोगमा आएको परिवर्तन, पानी प्रदूषणजस्ता अन्य मानवीय क्रियाकलापले भ्यागुताका प्रजाति संकटमा पर्दै गएका छन् । कान्तिपुरबाट
‘फाटेको गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर क्रिकेट खेलेँ’– उपकप्तान मल्ल
२ भाद्र २०७६, सोमबार १३:४८